ओलीले भने, ‘आज चिया खाएर कुरा गरियो, भोलि जेरी खाएर कुरा गरौँला’
ओलीले भने, ‘आज चिया खाएर कुरा गरियो, भोलि जेरी खाएर कुरा गरौँला’ ओलीले दिए प्रचण्ड, झलनाथ लाई इलामे चिया र घ्यूको प्रवचन, सुवास नेम्वाङ दङ्ग
कृष्ण गिरी मंगलबार, साउन २०, २०७७
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षबीच करिब एक हप्ता लामो संवादहीनताको अवस्था तोडिएको थियो १८ साउनमा ।
संवादको साक्षी थिए, नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ । १३ गते बिग्रेको दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध १८ गते सुध्रेको थियो । त्यस दिन नेकपाभित्रको गतिरोध अन्त्य गर्न दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलले केही प्रगति गर्ला भन्ने नेताहरुको बुझाइ थियो । तरप, बालुवाटारमा भएको छलफलबाट परिणाम निस्किएन ।
तीन घण्टासम्म चलेको छलफलमा के के कुरा भए होलान् त ? यस विषयमा चासो तथा जिज्ञासा राखिएको छ । ठूला ठूला नेताहरु विवाद मिलाउन बस्दा विषयमै केन्द्रित हुन्छन् होला ? देश र जनताबारे चिन्तनमनन गर्लान् ? तर, होइन रहेछ ।
१८ साउनमा बालुवाटारमा चार नेताबीच भएको छलफल भने पार्टीको विवाद मिलाउने विषयभन्दा पनि इलामको चिया र घिउका बारेमा धेरै बहस भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
बालुवाटारमा १८ गते दुई अध्यक्षबीच सहमति खोज्न भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले इलामको चिया खाने प्रस्ताव गरे । प्रस्तावसँगै आधा घण्टा चियाको बखान गरे । चियाको बखान सुनिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीको कुरामा असहमति जनाउँदै भने, ‘इलाम चियाभन्दा घिउका लागि प्रख्यात छ ।’
चियाको बखान सुनिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीको कुरामा असहमति जनाउँदै भने, ‘इलाम चियाभन्दा घिउका लागि प्रख्यात छ ।’
खनालको कुरा सुनेर फेरि ओलीले इलामको घिउका बारेमा करिब ४५ मिनेट प्रवचन दिएको खनाल निकट एक नेताले बताए ।
घिउको माहात्म्य सुनिसकेपछि प्रचण्डले मुख खोले । प्रचण्डले भने, ‘तपाईं त सबै कुराको विज्ञ भइसक्नुभएछ । यति भएपछि अब के चाहियो ?’ यसपछि ओलीले विषयवस्तु टुंग्याएर उठ्दै भने, ‘आज चिया खाएर कुरा गरियो, भोलि जेरी खाएर कुरा गरौँला ।’
यसपछि ओलीले विषयवस्तु टुंग्याएर उठ्दै भने, ‘आज चिया खाएर कुरा गरियो, भोलि जेरी खाएर कुरा गरौँला ।’
जब कि, नेकपामा १० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा विवाद बढेपछि पटक पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको समयमा ओलीले भारत र नेकपाका नेताहरु मिलेर सरकार ढाल्न लागिपरेको विवादित अभिव्यक्ति दिए । यसपछि नेताहरुले बैठकमा नै त्यसको प्रमाण मागेका थिए तर ओलीले प्रमाण दिनुको सट्टा विवाद झन् बढाउँदै लगे । ओलीको अभिव्यक्तिपछि उनको राजीनामाको माग झन् तीव्र रूपमा उठ्यो ।
ओलीको अभिव्यक्ति आउनुपूर्व स्थायी कमिटी बैठक एजेन्डामा चलेको थियो । अहिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । त्यसमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि सचिवालय बैठक बस्ने अथवा आवश्यकताअनुसार सचिवालय बैठक बस्न सक्ने अडानमा छन् । तर, ओली भने सचिवालयमा कुरा मिलाएर मात्र स्थायी कमिटी बसाल्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
नेकपाका १ सय ५२ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गदै नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । उता ओली भने स्थायी कमिटी बैठक नै यत्तिकै ढिसमिस बनाउने योजनामा छन् ।
ओली सामूहिकतामा भन्दा एकलौटी रूपमा चल्न खोजेको आरोप बहुमत पक्षले लगाउँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २०, २०७७ १५:३७